Isingeniso kanye nobuhle besofa kagesi – I-Baotian Samani Co, Ltd.
Isihlalo sesihlabathi sikagesi sinezinkinobho ezahlukene. Izinkinobho eziya phezulu naphansi kwinkinobho zingalawula phezulu naphansi ngemuva kwesofa. Ngokulungiswa kukasofa kagesi, isikhundla somuntu esikhusheni naso sizoshintsha, njengokuhlehlela emuva. Ngezikhathi, abantu bazohambisa izinkalo zabo emuva, futhi okuphambene nalokho. Uma ufisa ukuba neyakho pls xhumana nathi- a umkhiqizi wombhede wosofa.
I- "umlingo" kwesitulo sikasofa kagesi yilokho lapho kuhleli khona, ngemuva kuphezulu, futhi asikho isidingo sokungeza i- isenabelo sezinyawo ngaphambili, futhi izinyawo zingawa ngokwemvelo noma zibekwe ebhafini lezinyawo. Uma udinga i-footrest, ungasebenzisa inkinobho yokulawula ukuze uvuke ngokwemvelo. Yize ukwakheka kuyinkimbinkimbi kunezihlalo zendabuko, ukusebenza kunokwethenjelwa futhi ibanga liphezulu.
Izinzuzo zikasofa kagesi:
1. Usofa kagesi unomphumela wokunciphisa ingcindezi. Isihlalo sikasofa sithambile futhi ingcindezi emzimbeni womuntu incane, ngakho-ke kuzoba mnandi ukuhlala esihlalweni sosofa;
2. Usofa kagesi unomsebenzi wokubhucungwa. Lapho umuntu ehlala ku- usofa wasekhoneni wesimanje futhi wenza umsebenzi omncane, kuzodala ukudlidlizela okuncane kwemithombo nezinto ezithambile. Umzimba womuntu ubhekene namandla okunwebeka wezinguquko ezithile ngezikhathi ezithile, engadlala indima yokubhucungwa umzimba.
3. Usofa kagesi uyaguquguquka. Umcamelo wosofa wenziwe ngezinto ezithambile ezifana nelineni, nsundu, isiponji, njll. Kunemithombo eminingi ngaphansi, ezithambile futhi ezinwebeka.
Amathegi: Thenga usofa usethi, usofa kagesi
Isikhathi sokubhala: 2020-08-01